The Mask fresh-amanzi isipanji. Isifonyo ahlanzekile-amanzi isipanji. Isivuvu ka peroxide kanye kwamakhambi
isikhumba Smooth futhi zihlanzekile ebusweni - lena iphupho amantombazane babo bonke ubudala. Phela, nezinduna, induna, namabala amnyama haunted iminyaka eminingi, futhi mhlawumbe ngisho impilo yonke. Yimalini uya isonto ngalinye ukuze kuzuzwe ubuncane ubuhle? Ukuze ukuthengwa Scrubs, lotions, buso kanye neminye imikhiqizo yezimonyo? Girls, ungakabi ukhathele ulahla imali? Mhlawumbe sekuyisikhathi ukucabanga mayelana lokuthi umuntu zingabekwa ukuze, ngaphandle kokuchitha imali eningi? Wena uthi, "Cha! Lokhu akukwazi! "Futhi uqinisekile ngalokho? Eminyakeni eminingi nakho lesizukulwane esidala acoce indzaba ezahlukene. Futhi kulula ukufakazela. Ngakho, uma unentshisekelo ezishibhile futhi ezingabizi izindlela zokuhlale ubuhle isikhumba, bese lesi sihloko ungazange ukudanisa.
Izindlela ezingabizi kunayo esiku fresh-amanzi isipanji.
Kuyini isiponji fresh-amanzi, futhi yini indlela yayo umphumela esikhumbeni?
Bodyaga - izipanji eziningi coelenterates ukuthi umuntu eqoqa yonke ihlobo elide, bese omisiwe ngokuphelele. It bathengisa cishe konke Pharmacy in ifomu powder ogqamile (oluhlaza). Powder kwamakhambi - lasendulo ithuluzi-Umsizi, ngaphandle kwalokho kakho izindleko, akukho umuntu oyedwa. Okwamanje, i-powder iyathandwa kokubili imithi kanye izimonyo. Bodyaga possesses eqeda ukuvuvukala, ephulukisa izakhiwo eziqinile.
Indlela ewusizo powder kwamakhambi?
integument Engacasuli, ama-capillary ongama kakhulu futhi imithambo yegazi, ukugeleza kwegazi okuholela ezindaweni ezibuthakathaka isikhumba is kakhulu ngcono.
Ngenxa ukukhululwa enjalo izinto asebenzayo ezifana histamine, prostaglandin, powder bodyagi uphulukisa izicubu ikhuthaza resorption okusheshayo isibanda esikhumbeni nezimpawu.
Zonke izinqubo usebenzisa bodyagi oxygen isikhumba futhi ukwandisa okuqukethwe oxygen ezengeziwe esikhumbeni, lapho kuba zazivuma ngaphezulu futhi nokunwebeka.
Ukuze ubuhle kanye isikhumba wezempilo
The Mask fresh-amanzi isipanji kunesithembiso yokuhlanza ezijulile ebusweni, smoothes imibimbi, uphulukisa izilonda, izibazi angabekwa futhi ephatha induna e kuwukubonakaliswa zabo. Professionals abasebenza emkhakheni we Cosmetology, kutuswa ukusebenzisa fresh-amanzi isipanji ezihlukahlukene buso. Bathi ngale ndlela zonke izakhiwo eziyisisekelo zomuthi sizokwazi ukwenza esikhumbeni, ukuze kuqedwe ukufa kwabantu kukho konke ukukhubazeka. The Mask fresh-amanzi isipanji, ukubuyekezwa uqinisekise lesi, kuyasiza zibhekane ngokuphumelelayo nezinkinga eziningi.
Uyaxebuka azenze fresh-amanzi isipanji ngokuba ubuso. Omunye isipuni bodyagi buhlanjululwe esilinganayo amanzi, kule ngxube sengezwe ngezizathu ngaphambilini ukwenziwa ikhofi zingaxazululeki. Zonke izithako kumele zixutshwe kahle, ukusebenzisa ebusweni futhi uhlikihla isikhumba ngokunyakaza isiyingi cishe amaminithi angu-3. Khona-ke uxubha ngamanzi afudumele abilisiwe ukusebenzisa ubuso ukhilimu.
Lokhu buso ebusweni nge kwamakhambi ukunciphisa ububomvu, kususa izindawo ebonakalayo futhi ihlanze isikhumba izinhlayiya isikhumba esifile.
Okulandelayo izindlela yokwelapha kanye nokuvulwa isikhumba ebusweni - imaskhi ka peroxide kanye kwamakhambi.
Omunye teaspoonful (isipuni - yizinkinga) spoon bodyagi alulaze hydrogen peroxide endaweni isilinganiso 1: 1. Ingxube kwaphumela isetshenziswa ezindaweni inkinga (ibhulashi kangcono isicelo) nangemva ephelele omiswe hashaza ngamanzi abilisiwe. Sebenzisa ukhilimu ukuthi kufanelekile isikhumba sakho hlobo (noma bagcobe Aloe juice).
Isivuvu kwamakhambi peroxide kanye anezakhi eqinile anti-inflammatory: kwamaminithi ambalwa amabala abomvu kuyoba umbala kakhulu ziyancipha ngosayizi. Njengomvini sangaphambilini, le ngxube kuzokusiza ukuqeda izindawo ezibonakala kakhulu ebumnyameni.
Enye engengaphansi ngempumelelo indlela - imaskhi ngobumba kwamakhambi. Indlela Yokuthola wakhe ulula. Kuyinto kudingekile kuphela ukuthenga izingxenye ezifana ubumba (blue, omhlophe noma oluhlaza) kanye powder kwamakhambi. On umbuzo kanjani kute wente imaskhi ngobumba fresh-amanzi isipanji, impendulo elandelayo. Ngaleso isilinganiso 1: ukuxubana 2 powder nobumba (Yiqiniso, okungcono ubhekwa oluhlaza, kodwa ngamunye wabo okuthandwa ayo). Ukuze umphumela ingxube eyomile kancane kancane wanezela amanzi ukuthola ingxube ukungaguquguquki kancane luthe ukuqina of ukhilimu omuncu. The Mask singasetshenziswa kokubili endaweni ethintekile we epidermis (yangaphandle isikhumba ungqimba) noma ziye kuwo wonke. Okuwukuphela umehluko - ngalesi sikhathi. Kwezinye izindawo imaskhi kufanele igcinwe ukuze ome ngokuphelele, kodwa bonke ngokuphelele phezu kobuso bakhe - imizuzu akukho kuka 15 (esiphezulu - 17). Lapho isikhathi ugeze off abilisiwe (uyazikhethela) ngamanzi afudumele futhi zisebenza ubuso ukhilimu. Ngemva le nqubo ungase uzizwe ukuluma kancane, ezikuhlabayo - ungakhathazeki, it has isiponji fresh-amanzi ungene ebusweni isikhumba umphumela zayo zokwelapha.
Hhayi ezingabalulekile kangako kubantu abasha futhi umbuzo ukuthi imaskhi kusiza induna bodyagi. Impendulo esobala Yebo yebo. Yiqiniso, ngokushesha ngemva okokuqala ukufeza umphumela oyifunayo ngeke, kodwa ngemva 8-10 izinqubo uzokujabulela isikhumba sakho. Futhi nezinduna kanye nezinye sengozini ebusweni uzokutshela "ukuvalelisa okuthatha". Futhi into eyodwa ngaphezulu: buso ubuso ngeke zibuye ziphelelwe isikhathi nge kwamakhambi. Uyohlale ethandwa, ngoba ubhekwa indlela ephumelela kakhulu nengabizi ukufeza ubuhle ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Londoloza izinwele zami
Izinwele futhi "ubuso" abesifazane. Ngiyavuma, nicer okuningi ukukhuluma umuntu lapho zibukeke, zihlanzeke futhi emuhle. Kuyinto into - khuluma intombazane has okunamafutha, posechennye, ziyaqothuka izinwele-straw. Girls, ungakhathazeki, inkinga yakho zingaxazululwa ngaphandle ukusetshenziswa sikelo. Beauty and impilo izinwele zakho uzobuya buso ekhethekile kwamakhambi. Ngo ngezithako zawo kuhlanganisa bodyagi ajwayelekile powder ogqamile futhi isixazululo 5% boric acid (ungayithola enye by 6% i-hydrogen peroxide. Lokhu imaski magic (bodyaga + i-hydrogen peroxide) izilinganiso wathola omuhle kakhulu.
Indlela ukulungiselela: Isipuni esisodwa grey-oluhlaza powder ngobumnene ibangele njalo, engeza isixazululo boric acid ukuthola mass homogeneous ngesikhathi ukungaguquguquki efana ukhilimu omuncu.
ISEXWAYISO: Akunakusetshenziswa ungayisebenzisi ingxube ngaphakathi.
Ukuze oily kakhulu izinwele mass kumele kushiswa namabhati amanzi (ngombhangqwana) kanye deda on the sokuvalelisa (edingekayo ukuze ukwazi ukusebenzisa amagilavu iraba). Lapho ingxube uqala ukuba ashise kakhulu abalwa uhhafu kuphela ihora bese ikhambi Ukuqedwa. Inqubo Yiqiniso, akekho noyedwa phakathi emnandi, kepha ngemva kwamasonto 7 kuphela ngeke wazi izinwele zakho (wenze lokhu imaski Kunconywa kanye ngesonto, inani ukwelashwa incike okuqukethwe amanoni izinwele Inani eliyisilinganiso ukusetshenziswa -. Izikhathi 7).
Ukuze ziyaqothuka futhi yokuhlukanisa izinwele imaski kufanele kwesokunxele emaminithi la-20, ngaphandle kokulinda ukuba esivuthayo, emva ukugeza ngamanzi, amathiphu Kunconywa gcoba iyiphi ingane ukhilimu. Sebenzisa njengenda kanye ngesonto. Course - amasonto 5.
Mayelana horror, umhlane wami!
nezinduna Small zingavela hhayi kuphela ebusweni, kodwa futhi phezu emhlane nasemahlombe. Indlela yokubhekana nale isishayo? Ekubhekaneni nale nkinga, thina kuzosiza kwamakhambi ezidumile esiyingqayizivele imaski nobumba okwesibhakabhaka.
Lungisa le imaskhi ilula: ukuthenga izakhi ezidingekayo ku ikhemisi, ezifana fresh-amanzi isipanji, nobumba.
Ukulungiselela: ezine wezipuni bodyagi ukuthatha wezipuni eziyisikhombisa ngobumba. Hlanganisa kahle, futhi alulaze nge amanzi abilisiwe (ingxube kufanele uthole uqweqwe ngokwanele). Ukuze ezindaweni ezithintekile kwesikhumba amafutha ungqimba imaski sibeka phambili futhi yome ngokuphelele. Ngemva wageza off ngamanzi afudumele (hhayi abilayo liyadingeka). Sebenzisa ukhilimu (engcono kwanoma iyiphi ingane, it is ngokushesha wakwamukela futhi ayiqukethe izinto ezingafuneki ukuthi ilimaze amaseli isikhumba).
Le nqubo kumele kwenziwe akukho kuka 1 isikhathi ezinsukwini 5-6. Ingabe nje nezinduna zinyamalale. Ngokuvamile umphumela uba obonakalayo ngemuva kokusebenzisa lwesithathu. Kodwa wonke umuntu esikhunjeni sabo siqu, ngakho inkambo Kulokhu, umuntu usetha bebodwa.
Ingabe kufanele ngenze imaskhi
Finyeta, singaphetha ngokuthi i ukucija akudingekile ukuchitha imali eningi, ngoba ukuxazulula izinkinga eziningi kuyizindlela omkhulu kufinyeleleke futhi engabizi Pharmacy. Into ebaluleke kakhulu kulesi simo - isifiso. Isifiso ube ngcono, ukuba amahle angenakuvinjwa ikakhulukazi uqobo. Futhi-ke, buso, buso, kodwa ungakhohlwa mayelana nokudla ngendlela efanele. Phela, enye yezimbangela sesimweni esikhumbeni kuyinto nokudla okungenamsoco futhi yokuphila ngokuvamile. Ngakho, amantombazane abathandekayo abesifazane, sifinyelela iziphetho nobuhle elikhazimulayo. Ngifisa sengathi ngabe impumelelo ekufinyeleleni umgomo athandwayo futhi balazisa ezinjalo!
Indawo yokudlela Yoko Mokko ( "Yoko-Mocha"), Voronezh: amamenyu, ukubuyekezwa
Akunakwenzeka ukuba akhulelwe. Yini okumelwe uyenze?
Dragon Age III: iNkantolo Yamacala Ezihlubuki - ukudlala kwesizini elikhulu, ihlelelwe ekwindla
Monologues ezihlekisayo kwabesifazane - imibhalo ephelele
Makeup Cheshire Cat kusukela "ethi Alice in Wonderland" nge-Halloween ngezandla
Kuyini polyploidy? Iyiphi indima ifeza okukhethiwe futhi ngokwemvelo